नगर प्रमुख नेतृत्व लागि निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नगर प्रमुख नेतृत्व लागि निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो
आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४० मा प्रकाशित !
२० चैत, दाङ। आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जिल्लाको उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा नेतृत्व लिन दलहरू आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन । त्यसैगरी नेतृत्वको आकांक्षी पनि बढदै गएका छन ।
निर्वाचनमा विभिन्न व्यक्ति नेतृत्व लिनका लागि पार्टी नेतासँग टिकटका लागि दौडधुप गरिरहेका छन । दाङमा हाल दुई उमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहेका छन । जिल्लाको दुर्गममा रहेका राप्ती गाउँपालिका र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा खासै चर्चा हुन नसके पनि सुगमका नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने निर्वाचनको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा काँग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन स्थानीयवासीले गरेका छन । दोस्रो संविधान सभामा जिल्लाका पाँचवटै क्षेत्रमा काँग्रेस विजयी भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आफ्नो पार्टीले जित्ने नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काको दाबी छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसको तर्फबाट नगर प्रमुखमा गेहेन्द्र गिरी, घनश्याम रेग्मी, जगत खड्का, किरणबहादुर शाह, कीर्तिबहादुर खड्कालगायतको चर्चा छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो हुने एमाले दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का बताउन्छ । एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखका लागि घनश्याम पाण्डे, हिराचन्द्र केसी, नवराज लामिछानेलगायतको चर्चा चलेको छ।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट नगर प्रमुखमा प्रेमराज वली, रामबहादुर दहितलगायतको नाम चर्चामा छ । राप्रपाबाट कोमल वली, टोपबहादुर शाह, वङ्शी गौतम, भुपाल रावत, यामेन्द्र वलीलगायतको चर्चा छ ।
यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा काँग्रेसबाट अर्जुन श्रेष्ठ, भुपबहादुर डाँगी, रवीरकेश्वरी गौतमलगायत चर्चामा हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट अम्मर डाँगी, दामोदर अधिकारी, नरुलाल चौधरी, शरद अधिकारीलगायतको चर्चा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट जीवन गौतम, निर्मल आचार्य, मिलन डाँगीलगायत तथा राप्रपाबाट नरबहादुर बुढाथोकी, ध्रुव गौतम, छविनारायण जिसीलगायतको चर्चा छ ।
यस्तै लमही नगरपालिकामा काँग्रेसको तर्फबाट नगर प्रमुखमा कर्णबहादुर बुढाथोकी, रेशम खड्का, दिवानजङ्ग चौधरी, कृष्ण चौधरी, मधु न्यौपानेलगायत, एमालेबाट कुलबहादुर केसी, नारायण छम्पाली, रतनकुमार केसीलगायत तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सागर सुवेदी, नवीन योगीलगायत चर्चामा हुनुहुन्छ । राप्रपाबाट लीलाधर चौधरी, हरिनारायण चौधरी, देवप्रसाद घिमिरेलगायतको चर्चा चलेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: १९ वर्षमुनिको क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
NEXT POST Next post: संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने – मोर्चा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र २०, २०७३ ११:४०